Factory Factory | China mpanamboatra sofa, mpamatsy
Cool dia manana endrika vaovao ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininao miaraka amin'ny sofa Hollyann. Mametaka ny habaky ny tanàn-dehibe sy kanto anao, ity sombin-tsarimihetsika ity dia fanatanjahan-tena malefaka vita amin'ny lamba malefaka sy tongony marevaka. Mialà amin'ny fiononana, ary mihodinkodina tokoa ny haingon-trano.
Mipetraka lalindalina miaraka amin'ny fijery maoderina, ity famoriam-bola ity dia mitondra fampiononana malemilemy malefaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny lakilen'ny fihetsika manintona ao amin'ny fizarana dia ny tokotanin-tsambo ambany izay mamela toerana malalaka hipetrahana miaraka amina seza lava, ondana lamosina ary ondana. Voaravaka lamba lamba toy ny rongony, ny fizarana lolo dia misy zorony lolo ho an'ny vala tsara tarehy ary antsipiriany mahafinaritra. Voaforon'ny seza tsy misy sandry, zoro, fitiavana tsy misy sandry ary ottomanina, ny fizarana efatra dia Crate sy Barrel tsy miankina.
Miaraka amin'ny famolavolana fananganana habaka sy ny fahaleovan-tena modular, Strom dia mitondra seza fizarana misy ankehitriny ho an'ny efitrano kely sy trano. Voafangaro amin'ny seza zorony ankavanana sy chaise tsy misy sandry, ny fizarana roa dia voaravaka anaty harona feno fianakaviana chenille plastika ho an'ny firafitra maro azo kitikitihina. Ny silhouette misy boxy sy ny cushioning tery madio dia miaraka amina tongony metaly fantsona mahia vita amin'ny mainty matte. Ny fizarana roa Strom dia Crate sy Barrel tsy miankina.
Sonoran Block Son Foot
Lava, ambany ary natao ho an'ny fialan-tsasatra, mameno ny efitrano fandraisam-bahiny ankehitriny i Pasifika amin'ny endriny mora sy malefaka. Ny seza mifandanja tsara dia mampifandanja ny lalamby manify sy ny tanany manify miaraka amina maoderina ondana ondana, valizy ary seza boribory tsy misy tohotra omby. Mipetraka i Pasifika fa tsy lalina loatra, ka mahatonga azy io ho an'ny fiainana kely. A Crate & Barrel eksklusif, ny sofa Pasifika dia vita amin'ny hazo vita amin'ny injeniera voamarina avy amin'ny Forest Stewardship Council (FSC), ny fenitra volamena momba ny tontolo iainana ho an'ireo ala voatantana tsara.
Asaina ny rehetra hanangona. Manaitra ny fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny fampiononana sy ny fomba maoderina, Gather dia milahatra tsara sy ankehitriny. Ny sezalà 98-inch dia mamaky tany vaovao miaraka amina tokotanin-tsambo manify izay mametraka ny fifantohana rehetra amin'ny seza misy seza misy boxe sy plush. Tapa-kofehy ambony tanana sy kofehy tsy mitongilana hitazomana ny endrika madio fa tsy mikorontana. Volavola Crate sy Barrel manokana, ny sofa Gather dia vita amin'ny hazo vita amin'ny maotera izay nohamarinin'ny Forest Stewardship Council (FSC), ny fenitra volamena momba ny tontolo iainana ho an'ireo ala voatantana tsara.
Ao amin'ny aloky ny volondavenona indrindra, ny lambam-pandriana ao amin'ny sezak'i Calion dia mameno endrika amina loko maro sy hatsarana. Ny sandry mirehitra, ny ondana malaza ary ny ondana vita amin'ny flamestitch dia manampy panache amin'ity sofa mamy sy tsotra ity. Ny sezaky ny seza manohana dia manamboatra pad eo an-tanety iray ahazoana aina.